Yesmail Ayaa Ku Daraya Waxyaabaha Emailka Keena ee Keena Ciyaaraha iyo Cimilada | Martech Zone
Yesmail wuxuu kudarsadaa Email-kiciyeyaasha Dibadda ee Isboortiga iyo Cimilada
Talaado, Oktoobar 14, 2014 Talaado, Oktoobar 14, 2014 Douglas Karr
Suuqgeyaal ahaan, waxaan u maleyneynaa xogta macmiilka iyo dabeecadaha inay yihiin goobo ma guurto ah sida da'da, lambarka boostada, iyo milkiilaha guriga. Si kastaba ha noqotee, waxaan seegnay socodka tooska ah ee dhacdooyinka ka dhaca nolosha macaamiisha. Dhacdooyinka sida ugu fudud ee isbeddelka cimilada ayaa wax ka beddeli kara dabeecadda qofka macaamilka ah iyo caadooyinka wax iibsashada. Haddii barafku jidka ku soo socdo, tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaan u dukaamaysano taayirro cusub ama qalab barafka wadata oo ka dhaca waddadayada.
Isgaarsiinta la bartilmaameedsaday, waqtiga ku habboon, iyo macnaha guud ee la xiriira ayaa hela kaqeybgalka ugu sarreeya macaamiisha. Ololayaasha la kiciyay waxay ku habboon yihiin dhammaan sharraxayaashan oo sida caadiga ah waxay gaarayaan 2.5 jeer heerka furan ee ololayaasha ganacsiga-sida caadiga ah, iyo laba jeer heerka gujintooda. Si kastaba ha noqotee, suuqleyda ayaa wali ku dhibtoonaya dejinta iyo dejinta farriimaha kicinta cusub. Sirdoonka kicinta Yesmail waxay u oggolaaneysaa suuqleyda inay ka faa'iideystaan ​​awoodda xaaladaha cimilada dabiiciga ah iyo dhacdooyinka isboorti si ay u dejiyaan ololeyaal emayl oo la hadlaya danaha macaamiishooda, goobta, iyo jawiga degdegga ah, waqtiga dhabta ah.
Caadi ahaan, bixiyeyaasha adeegga emaylku waxay macmiilka uga dhigaan mas'uul mas'uulka ka ah barnaamijyada kicinta emaylka iyagoo adeegsanaya isku xirnaanta barnaamijyadooda barnaamijka. Waa wax weyn in la arko Sirdoonka kicinta Yesmail la bixiyay, taas oo aad uga fududaynaysa celceliska ganacsiga isku-darka ololaha kicinta dhacdooyinka suuqgooda suuqgaynta.
Kordhinta Sirdoonka Cimilada
Sirdoonka kicinta ee cimilada waxay u suurta galisaa suuqleyda inay jadwaleeyaan ololeyaal emayl oo geeya dalabyo marka xaalad cimilo horay loo dejiyay ay ku dhacdo meel juqraafi gaar ah. Shaandheeyaha cimilada waxaa ka mid ah:
kala duwan heerkulka
Xawaaraha xawaaraha dabaysha
Xaaladaha cimilada: daruuro, ceeryaamo, roob qabow, roobdhagaxyaale, roob, baraf, qorax, roobab
Sirdoonka Kiciya Isboortiga
Sirdoonka Isboortiga waxay siineysaa suuqleyda awood u leh inay jadwalaan isgaarsiinta emaylka ee geeya marka ay dhacdo dhacdo gaar ah oo isboorti dhacdo. Miirayaasha isboortiga waxaa ka mid ah:
Muddo (dhammaystirka ciyaarta, nuska nuska, rubuc / muddada dhammaystirka)
Natiijada kama dambaysta ah (guul / lumis)
Dhibcaha la dhaliyay (ka dib 5 taabasho, ka dib goolka 1aad, ka dib 100 dambiilood, iwm)
Tags: kicinta emaylkaemail kicinta ciyaarahakicinta emaylka cimiladayesmailemailka kicinta ee haayesmail kiciyayesmail kiciya sirdoonka
Faham xiiso leh oo ku saabsan sida Sirdoonka Goob-ku-saleysan ay u Caawinayaan Suuqgeynta Gawaarida